We She Me: ပဲစောင်းလျားသီးသုပ်
thandar kyaw - 1/8/10, 1:05 PM
ကိုအန်ဒီတို့မိသားစု ဒီနေ့ အသုတ်နဲ့နှိပ်စက်တယ်ဟေ့ ..း)
Anonymous - 1/8/10, 2:05 PM
ပဲစောင်းလျားသီးကို ပဲစောင်းခါးသီးလို့ပေါင်းတာ ခုမှမြင်ဖူးတယ်
တောင်ပေါ်သား - 1/8/10, 2:07 PM
စားချင်လိုက်တာ အိမ်ပြန်ဝယ်ပြီး သုတ်စားဦးမှ
သဉ္ဇာ - Thinzar - 1/8/10, 2:27 PM
အဲဒီ ပဲစောင်းခါးသီးနဲ့ ပဲမြစ်နဲ့ အမျိုးတော်မှန်း ခုမှ သိတယ် :D
Andy Myint - 1/8/10, 2:34 PM
ကျေးဇူးပဲ စာဖတ်သူ ..ပဲစောင်းလျားသီးလို့ ပြန်ပြင်လိုက်ပါပြီ။ စိတ်ထဲမှာ ပဲစောင်းခါးသီးလို့ပဲ ထင်ထားတာ။
ကိုဇေယျာ - 1/8/10, 3:02 PM
2010 မှာ ကိုအင်ဒီ blog post တွေပြန်တက်လာတာ မင်္ဂလာတစ်ပါးပဲဗျာ။
ဒီအပါတ် ပဲစောင်းလျားသီးသုပ်စားမယ် ကျေးဇူး။
ရွှေရတုမှတ်တမ်း - 1/8/10, 3:23 PM
Anonymous - 1/8/10, 5:54 PM
ပဲမြစ်က ပဲလေးထောင့်ပင်ရဲ့ အမြစ်မှန်း ခုမှပဲ သိတော့တယ်
အဘွားက သွားမကောင်းလို့ အမြဲတမ်းပြုတ်ပြီး သုတ်စားတယ်
လူငယ်တွေက အစိမ်းလိုက်ပဲ ကျွတ်ကျွတ်လေး သုတ်စားတယ်
ခရမ်းချဉ်သီး ထည့်သုတ်ရင် ပိုစားလို့ ကောင်းပါတယ်
Ko Layy - 1/8/10, 10:58 PM
Mingalar bar byar
Thanks for the menus. I really like it. Please visit to my blog www.samadihti.co.cc
Nge Naing - 1/8/10, 11:10 PM
ကျွန်မက ပဲစောင်းလျားကို စိမ်းစားငပိဖျော်နဲ့ အစိမ်းတို့စားတာပဲ ကြိုက်တယ်။ ကျွန်မတို့ အလှူအတန်းလုပ်ဖို့ ဈေးဝယ်ရင် အဲဒီမှာပဲ သွားဝယ်တယ် ကိုအန်ဒီ။ အဲဒီက BKK မှာ ထိုင်းမှာရှိတာ အကုန်ရတယ်။ ဆန်၊ ငပိ၊ ငါးခြောက်၊ ငန်ပြာရည် သဘောင်္သီးထောင်းတဲ့ ဂဏန်းစတာတွေကို ကျွန်မတို့ အဲဒီမှာပဲ သွားဝယ်တယ်။
Anonymous - 1/9/10, 5:15 AM
Pronunciation is correct.
Try to dip it in hot water for5minutes and eat it on its own. Guarantee you will like it.
khin oo may - 1/9/10, 10:27 PM
kom: အပြောကောင်းလို့ ရိုးရိုးပဲစောင်းခါးသီးတောင် စားချင်စရာဖြစ်သွားတယ် သုပ်စားချင်စမ်းပါဘီ
Rita - 1/10/10, 3:51 AM
(လူဆိုတာလည်း အခက်သား။ အစားအသောက်ဆို Exotic ဖြစ်ရင် ပိုစားချင်တယ်။ ရန်ကုန်မှာတုန်းက ဘာဂါတွေ၊ ပီဇာတွေ မကောင်းပေမယ့် စားချင်တယ်။ နိုင်ငံခြားရောက်တော့ မြန်မာပြည်က ဟင်းရွက်ကန်ဇွန်းကို တမ်းတမ်းတတ စားချင်ပြန်တယ်။)
အဲဒါ သိပ်မှန်တာပဲ :(
JUSTICE999BURMA - 1/15/11, 3:20 PM
ကျနော်တော့ ပဲစောင်းလျားသီးကို ရေနွေးဖျော (ခဏမျှစိမ်) ပြီး သေးသေးလေးတွေလှီး မြေပဲ (ထောင်း) နဲ့ဆီချက်ထည့်၊ သံပုရာသီးလေး ညစ် ပြီးသုတ်စား ရတာ သိပ်ကြိုက်တယ်....ငြုပ်သီးကတော့ အရင်ကထဲက အစပ်ကြောက်လို့ထည့်စားဖို့ စိတ်မကူးဘူး....... အဟီး.... အိပ်ယာနိုးစ ကိုအင်ဒီနဲ့အစ်မ တို့ ဘလော့မှာ သွားမတိုက်ပဲ ၀င်ဖတ်သွားအိ..........
Anonymous - 11/19/12, 1:50 PM
ပဲစောင်းလျားသီးသုပ် လိုကရှာရင်း နည်းစုံ တွေ့သွားတယ်..